Dacwadaha laga gudbiyey dembiyada dagaalka laga galay oo aad u kordhay | Somaliska
Dacwadaha ka dhanka ah dembiyada laga geeysto dagaalka ayaa aad u kordhay sida ay ku waramayaan booliska ammaanka qaabilsan ee Säpo.
Dacwadahaan ayaa gaaraya 63 kiis, oo ah kuwii ugu badnaa ee sanadkii 2016-ka soo gaara hey’adda qaranka ee ka-hortagga falal dembiyeedka dagaalka eeNOA. Hey’adda ayaa sheegtay in arrintan salka ku heeyso qaxootiggii faraha badan ee dalka soo galey sanadkii 2015-ta, kuwaas oo intooda badan ka soo hayaamay dalalka ay dagaalad sokeeye aafeeyeen sida Suuriya iyo isbadalo ku yimid habkii hore eey ay hey’adu u baari jirtay dembiyada ceynkaas ah.
“Tirada dacwadaha laga soo gudbiyey falal dembiyeedyada ayaa kor u kacay, tan iyo markii ay qxooti badani dalkaan ku qul quleen sanadkii 2015-ka xilligaas oo ah xilli misna kor u kacaan dawacdaha bulshadda ka yimaada, laata socdaalka oo lafteeda gacanta ku heeysa faylal iyo ugu dambeyntii warbixino dhinacyo badan ka yimid oo ay qaateen” ayey tiri Patricia Rakic Arle, oo ah madaxa hey’adda qaranka ee hortagga falal dembiyeedka dagaalka ee NOA..
Guddiga ayaa sheegay in 63-da kiis ee sanadkii 2016-da soo gaaray ay ahaayeen tiradii ugu badneyd ee gaara tan iyo wixii dambeeyey markii dhidibada loo taagauy sanadkii 2008-dii.
Patricia Rakic Arle, waxaa ay sidoo kale ay sheegtay dadka dacwadaha lugu soo oogay ay intooda badan ka yimaadeen dalka Suuriya, halka markii hore ay ahaayeen falal dambiyeedo ka dhacay dalka Yugaaslafiya, Ruwanda iyo wadamo kale. Dawladda Sweden ayaa waxeey kal hore qalinka ku duugtay heshiisyo caalami ah oo dhigeya in dabagal iyo baaris lagu sameeyo dembiyada laga geeysto dagaallada sida ku xad gudabka bani’aadnimada iyo xasuuqa bulshadda.
Maanta ayaa maxkamad la xiriirta fal dambiyeed la soo taagay nin u dhashay wadanka Suuriya oo lugu eedeynayo toogasho loo geeysta askar gadooday oo horey maamulka Bashar dil ugu xukumay. Patricia Rakic Arle-na waxaa ay sheegtay ineeysan aheyn markii ugu horeeysay ee ay helaan cadeeymo la xirriira dadka lugu tuhmayo ineey fal dambiyeed dagaal ka geeysteen dalalkoodii.
Ugu dambeyntiina inkastoo hey’adu sheegtay ineey soo gaareen dacwdo kor u dhaafay lixdameeyo kiis hadana waxaan weli soo gaarin dacwado ay bulshadda soomaalida Iswiidhan ku dhan u soo gudbiso. Soomaalida oo la ogsoon yahay in dalkoodu ka dhaceen fal dambiyeed dagaal iyo ku tumasho xuquuqda aadanaha, tiiyoo ay jirto ayaa hadana waxaa muuqata ineey arrintaasi fulinteeda adag tahay soomaalida oo tafaraaruq xagga qabiilka ah saameeyn xoogan ku leh.
Xagee marayaan dadaalada Soomaalida
Maxkamada Socdaalka oo u fadhida arimaha Soomaalida